musha Europe Vatambi Vanotamba Dominic Thiem Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Yedu Dominic Thiem Biography inokuudza Chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Wife kuva, Lifestyle, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, tinoratidzira nhoroondo yeAustria nyanzvi yetennis mutambi. Nyaya yake inotangira kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira neTennis. Kuti ndikupe iwe kuravira kwechinhu chinobatika cheDominic Thiem's ​​Bio, heino ipikicha yekufananidzira yehupenyu hwake trajectory.
Iyo Biography yaDominic Thiem. Kubva paUdiki kusvika panguva yeMukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevatambi veTennis vanobudirira kubva kuAustria muEurope. Nekudaro, vashoma chete ndivo vakaverenga yakazara Hupenyu Hupenyu hwaDominic Thiem. Tinayo, iwe uye nerudo rwemutambo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Dominic Thiem nyaya yehucheche:
Kune ekutanga maBiography, ane zita remadunhurirwa Domi. Dominic Thiem akazvarwa pazuva re3rd yaGunyana 1993 kuna amai vake, Karin Thiem naBaba, Wolfgang Thiem muguta reWiener Neustadt, Austria.
Mutambi weAustria tenesi ndiye wekutanga pakati pevana vaviri (vese vakomana) akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake vane mutambo.
Sangana nevabereki vaDominic Thiem - Wolfgang naKarin sezvavanofara mwanakomana wavo.
Iye 2020 Grand Slam anokunda akapedza makore ake ehudiki muLichtenwörth, guta diki remusika muAustria. Dominic akakurira padivi nemunun'una wake Moritz Thiem - uyo ane makore matanhatu mudiki. Pakutanga kwevaviri, akadanana netenisi - nekuda kwedzidziso dzekutanga kubva kuna Baba vake, Wolfgang aishanda semurairidzi.
Mhuri yaDominic Thiem:
MuAustria anobva kumhuri ine hupenyu hwehupenyu hwakatenderedza rudo rweTennis mitambo. Waizviziva?… Vabereki vaDominic Thiem (Wolfgang naKarin) vese varairidzi vetenisi. Nekudaro, hazvishamise kuti kuda Tennis kwakakosha kumba kwake.
Kubva pakutanga, mhuri yaDominic Thiem yakabudirira sepamusoro pevagari vepakati-vepakati vagari. Vaviri Karin naWolfgang vakawana mari yakanaka kubva pabasa ravo sevarairidzi. Nekuda kweizvozvo, zvakawedzera kuve zvakasununguka kune veimba yake kuti vabatane zvakakwana pamwechete sezvo paive nekutarisana kwakabatana mumitambo.
Dominic Thiem Mhuri Yakatangira:
Kunyangwe hazvo mutambi ari kusimukira akazvarwa muWiener Neustadt, tinoteedzera midzi yake kuLichtenworth. Baba vaDominic Thiem, Wolfgang, chizvarwa cheLichtenworth muAustria uye ndewevachena. Iri iguta rine hupenyu uko anenge munhu wese anorarama hupenyu hwemahara.
Mukundi weSlam wa2020 ane mhuri yake midzi kubva kuguta rekumusika rinozivikanwa nefekitori yaro yenzara uye chigayo chekotoni. Zvinosuruvarisa, isu tinorangarirawo Lichtenworth yekuve musasa wechibharo wevasungwa panguva yekutambudzwa kwechiJuda. Sekuziva kwedu, iyo Tennis nyeredzi ndiye anonyanya kuzivikanwa munhu kubva muchikamu chino cheAustria.
Dominic Thiem Dzidzo:
Kuenda kuchikoro kune wechidiki zvaive zvakakosha. Kunyangwe paive nekutarisisa padzidzo, kutamba tenesi kwakaramba kuri kwakanyanya. Vabereki vaDominic Thiem - Wolfgang naKarin - vakave nechokwadi chekuti mukomana wavo aive nehunyanzvi hwekudzidzisa tenesi mukati mevhiki uye pakupera kwevhiki.
Sezvo nguva yakafamba, Dominic aifanira kusiira chikoro panzira saka aizoisa pfungwa yake yakazara pabasa rake. Wolfgang naKarin vakatsigira danho rake sezvo vaive vemaonero ekuti dzidzo yenguva yakazara yaisazomuona achitarisa.
Achangotanga mukomana wake kudzidza kudzimba, baba vake (Wolfgang) vakavhura diki tenesi chikoro. Imba yekudzidzira yaive imwe yakabatanidza tenisi kudzidzisa (yevana) neyakajairwa chikoro system.
Dominic Thiem Tennis Nhau (Mazuva Ekutanga Mukurumbira):
Kuisa hwaro hwakanaka hwebasa remwanakomana wake, Wolfgang akamaka padhuze nemukurumbira wetenisi murairidzi anozivikanwa saGünter Bresnik. Munguva pfupi, Dominic mudiki akanyoresa baba vake chikoro chevadzidzi muVienna. Ndichiri ipapo, murairidzi mutsva (sekuonekwa pazasi) akamubatsira kukura nekukurumidza chaizvo.
VERENGA Caroline Wozniacki Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Gunter Bresnik akazova murairidzi waT ​​Thiem nenzira yakasununguka paakasvika makore mapfumbamwe. Muchokwadi, aive Bresnik akamugadzirira ramangwana rake guru. Iye akabva atanga kushanda pana Dominic mushure mekumugamuchira kubva kuna Baba vake. Kutanga, Gunter akamubatsira kubvisa tsika dzakaipa dzeTennis. Akayambira Dominic kuti achinje backhand rake remaoko maviri kune rimwe ruoko. Kuita izvo chete kwakapa mhedzisiro sezvo zvakaunzira mukomana mudiki kubudirira kwake kwekutanga.
Matangiro Ekutanga Ehutano:
Kunyangwe dzidziso dzakanaka dzaakatambira kubva kuna Günter Bresnik, zvinhu hazvina kufamba zvakanakira Thiem sezvaakasvika makore gumi nemaviri. Pane imwe nguva panguva iyoyo, mukomana murombo akatanga kunetsekana nenyaya dzehutano.
Vabereki vanonetseka - Wolfgang naKarin vakakumbira mhinduro kubva kuna vanachiremba pane izvo zvavanoona mumuviri wemukomana wavo. Mhedzisiro kubva kuhutachiona yaive nazvo yekuti Dominic yaive nekukura kukuru kukura kwemasentimita gumi nematanhatu. Nekutarisirwa kwakakodzera, ramangwana Tennis nyeredzi rakakunda hutano hwake. Kumufaro wemhuri yake, akadzokera kunoita chinhu chaaida.
Upenyu hweMabasa Ekutanga:
Mutambi wetenisi weAustria akanakidzwa nekubudirira mushe semudiki tenesi mutambi. Kare ikako (semuyaruki), Thiem aiverengerwa kumusoro seNhamba 2 mutenisi (yevana). Gore Thiem rakashandura pro (2011) rakamuona achiziya nenzara kuhwina mazita. Gore iro, akatora chinhanho chekupera kwe2011 French Open Boys 'kwaakakunda 2011 Orange Bowl.
Dominic Thiem Biography- Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Achangopedza kuita hunyanzvi, akaenderera mberi nekunyora kukunda kwake kwekutanga kweATP pamusoro pemunhu Thomas Muster, aimbove nyika Nha. 1. Iyi ngano yakanga ichangodzoka kubva pamudyandigere muna 2010 zvichitevera zororo ramakore gumi nerimwe. Mwaka 11 yakave shanduko yebasa raThiem paakasvika kumagumo emutambo weATP.
Zvakare Iro gore, Dom akapaza kupinda mune tenesi yepamusoro zana kekutanga. Akabata rekodhi semutambi mudiki kupedza 100 ari pamusoro 2014, akaiswa pamakumi matatu nepfumbamwe. Nekuda kwekushanda nesimba uye kusachinja-chinja, Dominic akahwina zita rake rekutanga pro gore rakatevera (50) kuOpen de Nice Côte d'Azur muFrance.
Mushure mekuhwina mukombe uyu, nyika yakatanga kuramba yakamutarira. Panguva ino, nyeredzi iri kusimuka yakazivikanwa nevatambi vakuru uye vatapi venhau vechikuru semutambi wezveramangwana. Iro ramangwana rakauya nekukasira. Kukunda mazita matatu eATP kuzita rake - sagore ra2015 - kwakasimbisa kudzidza kwaTeem kuchikwata ichi chakazadzwa nevakanakisa.
Kukunda izvo hazvina kumuita kuti atendeuke saDominic (mugore raitevera) akazosvika pamutambo wake wekutanga weGrand Slam ku2016 French Open. Iro gore, iye zvakare akanyoresa kuhwina kunopesana nezvinodiwa naDavid Ferrer uye Rafael Nadal - inching padyo neiyo World Top 10 masosi.
Dominic Thiem Bio - Iyo Yekubudirira Nyaya:
Gore ra2016 raigona kunge riri gore rekushandurwa kweiyo yeAustria tenesi nyeredzi uyo akawana yake yekutanga hardcourt zita uye akamhanyira kune wechinomwe pamatanho epasi rose.
Panzvimbo pekugumburwa, Thiem akabva pasimba kuenda pasimba. Mugore rinotevera 2017, akanyoresa kuhwina Djokovic uye Federer, kupaza mukati yepamusoro 4 yeiyo ATP masosi.
2018 yaipawo mubairo kuna Theim sezvaakasvika mufainari yeFrench Open - mhedzisiro yake yakazonaka muMaja Kurwiswa kwakasimba kwaT Thiem uye ruoko rwakabata ruoko rwakamuwanisa rumbidzo kubva kumativi ese. Zvekare, akahwina rake rekutanga Masters 1000 zita ku2019 Indian Wells Masters, achirova Roger Federer pakupedzisira.
VERENGA Roger Federer Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Achizivisa zita rake kupasi rose muna 2020, Dominic akahwina mukombe wake wekutanga weGrand Slam kuUS Open neAustralia Open yekupedzisira. Dominic Thiem akave mutambi wekutanga muiyo Open Era kupora kubva pamaseti maviri pasi uyezve vakarwa vakarova kurova Alexander Zverev pakupedzisira.
Ichitevera inguva yenhoroondo, iyo 6 ft 1 tenesi nyeredzi yakahwina muAustria Sportsman wegore mubairo we2020. Ino inguva yechina mutambi wetenesi kuhwina mubairo kubva pakagadzirwa muna 1949. Vamwe vese, sekutaura kwavo, inhoroondo.
Dominic Thiem's ​​Hupenyu Hupenyu naKristina Mladenovic:
Kunyangwe kufambidzana kungave kuri kukanganisa, mutambi wetenisi akambomisa hukama hwake. Dominic Thiem aimbove muhukama naKristina Mladenovic, mutambi wetennis wechiFrance. Vaviri vakatanga kufambidzana pakati pe2017 asi vakapatsanura kutenderera Mbudzi 2019.
Nei Thiem akarambana naKristina Mladenovic:
Vese vadikani vakasarudza kupedza hukama hwavo nekuda kwedaro chinhu. Mabasa avo etenesi akaita kuti vafambe vachitenderera pasirese - vachigadzira mukaha wevadikani. Nekuda kwehukama hwehukama, zvakave zvakaomera Dominic naKristina kushandisa nguva yakanaka pamwe chete. Iye 2020 Grand Slam anokunda haana kuroora panguva yekunyora kwake Biography.
Hupenyu Hwega hwaDominic Thiem:
Kunze kwebasa rake reTennis, Dominic mutambi mukuru wenhabvu. Anotsigira Chelsea Football Club. Kuda kwake bhora kwakaita kuti awane kirabhu yake yebhola inonzi, TFC Matzendorf. Iye, mukuwedzera, anofarira kuona mitambo yekusvetuka ski. Thiem akamboudza vateveri kuti akakurira mumaruwa uye ndosaka aine hukama hwakanaka kwazvo nemhuka.
Dominic Thiem Maitiro:
Iyo yeAustria tenesi nyanzvi mutambi ane mashoma emhando dzakanakisa mota dzepamusoro pasirese. Kubva pane zvatinoziva, rake raanofarira mota kara inoita kunge yakatsvuka kana nhema.
Imba yaDominic Thiem iri muLichtenwörth, Austria inofungidzirwa kuva $ 1 Miriyoni. Iye zvakare ane mashoma mabhureki anomutsigira parutivi kubva kune rake tenesi basa. Mamwe mashoma emhando anosanganisira Adidas, Babolat, Bank Austria, Kia, Rolex, Red Bull, uye Sky Sport. Chekupedzisira, Dominic anoda kushandisa mari yake yetenisi kunakidzwa neumbozha hwemugungwa-parutivi zororo.
Thiem ine mari inofungidzirwa inosvika madhora zviuru makumi maviri nematanhatu. Sekureva kwaForbes, Thiem akahwina mari inoshamisa $ 26 miriyoni kubva muna Chikumi 11.1-Chikumi 2019. Iye ari wepfumbamwe pane runyorwa rwevatambi vetenisi vanobhadharwa zvikuru mukati menguva iyoyo. Chekupedzisira, rake rakakura basa remubairo mari (sekuna 2020) ndeyekuburitsa $ 2020.
Dominic Thiem Hupenyu Hwemhuri:
Anouya achibva kumba, ane vabereki vanoziva zvinorehwa nekuzvipira zvese mune zvemari uye mutsika. Zviito kusvika parizvino zvakabatsira mukuita Dominic nemunin'ina wake kuve munhu wekubudirira. Muchikamu chino, isu tinokuudza zvakawanda nezvevabereki vake uye mukoma.
Nezve Baba vaDominic Thiem:
Wolfgang Thiem mudzidzisi weTennis uye zvino maneja wemwanakomana wake. Akatora mutoro wekusimudzira basa raDom junior asati amupa kushamwari yake Gunter Bresnik uyo akatarisira mwanakomana wake kwemakore vaviri vacho vasati vasiyana mu2019.
Ndichiri kunyora iyi Biography, Wolfgang semurairidzi anotungamira weAustria Nha. 2 Dennis Novak uye weAustria Nha. 3 Sebastian Ofner. Chekupedzisira, Wolfgang Thiem murume akaisa mari mumwanakomana wake. Muchokwadi, mari yacho yaive yakakwira zvekuti akambonzwira tsitsi vabereki vevatambi vari kutanga uye vasingazive zvekutarisira maererano nemutengo.
VERENGA Novak Djokovic Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Zvimwe Zvizhinji nezvaamai vaDominic Thiem:
Karin Thiem ndiMama ane hupenyu waDominic - zvakare murairidzi wetenisi. Akave zvakare akabatsira mukubudirira kwehunyanzvi hwevana vake. Karin akarongedzazve hupenyu hwake kuti aenderane nechirongwa chechikoro nemitambo yetenisi yaDominic nemunin'ina wake. Iye anogona kuoneka munzvimbo dzese dzinotamba nemwanakomana wake.
Zvimwe Zvakawanda Nezvehama dzaDominic Thiem:
Zvakakosha kutaura kuti ndiye mwana wekutanga pakati pevana vaviri vakazvarwa naKarin, amai vake. Munun'una waDominic, Moritz Thiem, zvakare mutambi tenesi. Akazvarwa muAustria pa8th yaDecember 1999 - makore matanhatu mudiki pane mukoma wake mukuru.
Moritz ane basa-rakakwira ATP singles chinzvimbo che1294 chinowanikwa musi wa9 Gunyana 2019. Anogara pasi pemumvuri wemunin'ina wake bhidha anova iye anokunda chingwa chemhuri.
Mutambi weTennis ane mashoma mashoma emhuri muAustria. Vakakodzera kucherechedzwa ndiSekuru nasekuru vake, vaimutsigira. Waizviziva here?… Ambuya vaDominic vakambotengesa imba pakati peVienna kuitira kuti Dominic aenderere mberi nekudzidzira tenesi.
Dominic Thiem Untold Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane zvishoma chokwadi chingangobata chako chinoshamisira.
Chokwadi # 1 - Dominic Thiem's ​​Amai vaTattoo Tsika:
Kuratidza rutsigiro rwake rwakakura uye kuzvipira pabasa remwanakomana wavo, amai vaDominic vane tsika inonakidza kubvira 2019. Anogadzira tattoo mumuviri wake kupemberera kukunda kwemukomana wake. Chikonzero, sezviri pachena, cheiyi tsika inonakidza kubheja kwakaitwa naKarin naLucas, shamwari yaDominic Thiem.
Chokwadi # 2 - Yakazara Rudo rweNhabvu:
Mutambi wetenisi fan-yakaoma Chelsea fan. Dominic Thiem anowanzoenda kundotarisa Chelsea Vs Arsenal Matches nemhuri. Kuda kwake bhora kuri pachena zvekuti akatotanga kirabhu yake yenhabvu muAustria. Munguva yetenisi isiri-mwaka, Thiem anotamba nhabvu muminda yemuno - kunyangwe mumakore ake ehudiki. Iye zvakare ari padyo nevatambi veChelsea - mumwe weavo ndiWillian.
Chokwadi # 3 - Kukakavara Kwemhuri:
Nekuda kwekuda kuti mwanakomana wake azvitorere sarudzo, Wolfgang Thiem akafunga kudhonza Dominic kubva kuGunter (murume akamudzidzisa kubva paudiki). Uku kukura kwakatungamira mukukakavadzana kwepamutemo pakati pemhuri yake nemurairidzi akavaona sevasina Kutenda.
Chokwadi # 3: Ecosystem Anoshanda:
Dominic Thiem anopfeka zvishongo zvekutsigira Nyanza. Akazvipira ega kudhonza mapaundi emarara kubva mugungwa. Ari kuitawo kugadzirwa kwenzvimbo inogara hupenyu hwemugungwa. Kure kwetennis, anoshanda nemasangano ane basa rekuona kuchengetedza makungwa.
Kutenderedza kumusoro Dominic Thiem Biography uye Yehucheche Nhau, tinosvika pakuona kuti pane mhedzisiro yekukanganisa kwemhuri. Isu takaona kuti vabereki vake (Karin Thiem naWolfgang Thiem) vakatsigira nekuzvipira zvakadii pakurota kwake uye neshungu.
Kutevera kuburikidza nekushingairira uye kutsunga, Dominic akakwira manera kune mukurumbira - kunyangwe iwe zvinoreva kutyora maitiro ake kuhwina machisi.
Chikwata chedu chinovavarira kururamisa uye kusasarura pachinenge ichiendesa Iyo Biography yaDominic Thiem. Ndokumbirawo utizivise kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka mune zvirimo. Zvikasadaro, tizivise muchikamu chekutaura - iwe unoona pane yedu nyora uye mutambi weTennis.
Childhood Biography Diary- kweMA MALE TENNIS STARS